प्रदेशका नाममा रजौटा प्रवृत्ति भयो, मानविय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ?(भिडियो हेर्नुस्) – Sapana Sanjal
कोरोना संकट व्यवस्थापनमा कानुनी प्रक्रिया छोट्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्। कोरोना संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रियाका कारण थप जटिल हुन नदिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘हाम्रा प्रक्रिया र आर्थिक अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु भएन। प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे–जे गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुस्। १५ दिनमा हुने काम एक हप्तामा गर्ने, एक हप्तामा हुने काम एक दिनमा गर्ने र एक दिनमा हुने काम एक घण्टमा सक्ने गरी गर्नुस्’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका नाममा राज्य रजौटाको प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रवाट पठाएको मन्त्रीकै टोलीसंग त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले भेट्न नचाहेको उनको भनाई थियो । नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको भिडियो क्लीपमा उनले सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री प्रति आ क्रो श ब्यक्त गरेको देख्न सकिन्छ । उनले भनेका छन्, , ‘यस्तोमा राजनीति गर्न छोड्नुहोस् ।
प्रदेश नम्बर ७ को सरकार, यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ । केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ । जाउँ हाम्लाई चाहिदैन केही पनि । यो भन्दा के हुन्छ रु प्रदेशका नाममा, केका नाममा राज्य रजौटा भएर चलाउने प्रवृत्तिहरु । मानविय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ?
Prevएमाले विवाद मिलाउन १० सदस्यीय कार्यदलको टुंगो लगाएर वाहिर निस्केका ओलीले दिए यस्तो प्रतिकृया
Nextयी स्रष्टा जस्को हुन्थे लाखौ मलामी तर कोरोनाले लाँदा आज कोहि भएनन्